Any Brezila, filaharana handresena ny tahotra ary hitolomana ho an’ny zon’ireo mpifindra monina · Global Voices teny Malagasy
Any Brezila, filaharana handresena ny tahotra ary hitolomana ho an’ny zon’ireo mpifindra monina
Voadika ny 31 Desambra 2018 4:49 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, Italiano, Português
Sora-baventy teo anoloan’ny Diaben’ireo Mpifindra-monina faha 12 l Sary : : Rodrigo Borges Delfim/MigraMundo
Notatatataina ny teny fanoherana izay teo ambany foto-kevitra hoe’’ Aza mitsara ahy raha tsy mahafantatra ahy’’, nilahatra tao amin’ny 12° Marcha dos imigrantes ( Diaben’ireo mpifindra-monina) tao Sao Paolo ireo mpifindra monina avy any amin’ireo faritra maromaro eran’izao tontolo izao ny faha 2 Desambra. Namory ireo mpikambana mpifindra monina amin’ny fiarahan'ny fikambanana, sampan-draharaha, vondrom-piarahamonina ary ireo mpanohana, ny hetsika izay atao isan-taona hatramin'ny taona 2007 aryteo amin’ny Lalambe Paulista nandritra ny telo taona .
Araka ny tombatomban’ny Polisy federaly, amin’ireo mpifindra-monina miisa 1,8 tapitrisa monina any Brezila dia monina ao Sao Paolo ny 385 000 amin’izy ireo. Ahitana ireo mpitsoa-ponenana sy ireo mitady fialokalofana ity tarehimarika ity.
Nandray fanintelony ny Marcha dos Imigrantes ny lalambe anisan’ny malaza indrindra ao Sao Paolo. Sary : Pâmela Vespoli/MigraMundo
Miady ho an’ny zony
Naneho ny fihetseham-pony tamin'ny mikrô manoloana ny fitsarana an-tendrony izay atrehin’izy ireo isan’andro ireo mpifindra-monina, ny zavatra iriany mikasika ny fiheveran’ireo Breziliana azy ireo, ary ny fahatakarana ny adiny ho an’ny zony ihany koa. Anisan’izany ny zo hifidy, ny lalànan’ny maha-olombelona sy ny lalàna demokratika momba ny fifindramonina, ny famaranana ny fandroahana, ny asa fanandevozana ary ny fanambakàna ireo mpifindra monina sy ireo mpitsoa-ponenana.
Mitaky asa mendrika mifandraika amin’izany sy ny zo hahazo taratasy ilay Maoritaniana 34 taona, Lassana Kone. Nivelona tamin’ny asa fivarotana’’esfihas’’ tsy ara-dalàna izy, karazan-tsakafo misy hena, satria tsy vitany ny nikarakara ny taratasiny ara-dalana teny amin’ny birao Breziliana. ‘’Tonga aho mba hampiseho fa misy aho ‘’, hoy izy.
Niady hevitra momba ny olan’ny mpifindra monina tonga ao Sao Paolo ny Vaomiera miaro ny zon’olombelona araka ny mpanolontsaina monisipaly Juliana Cardoro (PT), izay mpikambana ao anatin’ity filankevitra monisipaly ity ihany koa. ‘’Mazava fa tsy misy teti-bola ho an’ity resaka zon’olombelona ity, indrindra moa fa ho an’ny fandrindrana ny mpifindra monina’’ hoy izy.
Nitantara i Juliana fa kely ny loharanom-bola hahatraran’ny CRAI ( Foibe hahitana sy handraisana ireo mpifindra monina) ny tanjony ao Sao Paolo. Nangatahan'ny vaomiera ny hampidirana ny politikan’ny mpifindra monina amin’ny tetibola raha araka ny tatitra farany.
Fisoloantena roa sosona
‘’Anisan’ny olona mandray anjara amin’ny fiarahamonina ihany koa izahay, mandoa hetra ihany koa izahay, miasa mafy tena mafy izahay. Miasa mafy izahay, ho an’ny firenena mba ho tsaratsara kokoa, satria anisan’ny tenanay vaovao izany”, hoy i Ramberto Suarez Roca raha nanazava, izay fantatra ihany koa ho manana anaram-bavy hoe Florencia, izay avy any Bolivia efa–taona lasa izay.
Tahaka an’i Florencia, nizara ny hafany tamin’ireo olona samihafa i Remberto. Nivoaka mpandresy tamin’ny Fetiben’ny Mozika sy ny Poezia ho an’ny mpifindra monina faha-7 izy. ‘’Ny atao hoe mpifindra monina dia tsy fanandevozana fotsiny ihany, na fijaliana fotsiny ihany, fa fifaliana sy fahasamihafana ihany koa. Tonga eto izahay mba hanome fitiavana sy fifaliana, ary ny tenako no porofon'izany’’.
Vao indray mandeha izao no nandray anjara tamin’ny filaharana andalam-be i Remberto Suarez Roca.l Sary : Pâmela Vespoli/ MigraMundo.
Raha hiresaka momba ny filoha vaovao Jair Bolsonaro- izay efa nihevitra ireo mpifindra monina ho toy ny ‘’fako’’, dia tsy adinony ny naneho tsikitsiky mba hanehoany ny fanoherany. “Tsy fantatra izay hitranga amin’ny governemanta vaovao. Tena matahotra roa avo heny aho amin’ny maha mpifindra monina LGBT ahy’’ hoy ny fehin-tenin’i Remberto.
Tsy fotoana tokony hatahorana izao hoy ilay vehivavy Kolombiana Maria Paula Botero izay 29 taona. Ny tahotra, mandavo olona amin'ny tany izany. Tsy maintsy mihambo amin’ny maha-izahay anay izahay, ary tsy maintsy miaro ny fahamendrehanay ’’ hoy izy nanamafy. Iray amin’ireo solontenan’ny vondron-tambajotram-behivavy mpifindra monina, vehivavy mifanambady sy sady vehivavy no lehilahy i Maria Paula.
Nanazava izy fa nandray anjara tamin’ny Diabe satria ilainy ny ho hita. ‘’Amin’ny ankapobeny dia ny tontolon’ireo lehilahy miaraka amin’ny feon-dehilahy no hita any. Tsy ilaina izany. Manana feo izahay, ary manana ireo fahaiza-manao rehetra sy ny fahaiza-manaon’izao tontolo izao mba hanao izay azonay atao’’.
Mizara ny kolontsainy
Raha nitafy akanjo nentim-paharazana Nikaragoaiana, nisaotra ny firenena izay nonenany nandritra ny 36 taona noho ny dihy i Ana Carolina Hildalgo Torai . Araka ny heviny, manankarena ny kolontsain’ny tanindrazany, manankarena fandriampahalemana, fitiavana ary firaisankina izay iriany ho an'ny Breziliana ihany koa. ‘’Ahafahanay maneho ny fihetseham-ponay ho an’ny Brezila sy ny hisaotra azy ity filaharana mahafinaritra ity’’.
Nampiseho ny dihy nentim-paharazana any Nikaragoa i Ana Carolina Hidalgo Torai nandritra ny filaharanal | Sary: Pâmela Vespoli/MigraMundo
Nanohy ny fomban-drazany tamin’ny alalan’ny dihy ihany koa ilay tanora Boliviana Christian Jhoel Acho Aliaga. Na dia niaiky aza izy fa nanana fahatsiarovana kely nampatahotra azy tamin’ny fahazazany (tonga tany Brezila izy teo amin’ny faha 11 taonany), dia nilaza izy fa tena hireharehany ny fiaviany ary maniry ny hizara izany amin’ireo Boliviana hafa tonga mbola tena tanora any Brezila.
‘’Menatra ireo ankizy sasany raha milaza fa Boliviana izy ireo satria tsy fantany hoe manankarena ny fireneny. Samy manana ny harenany avy ny firenena tsirairay, tena tsara avokoa izy ireny, noho izany, tsy maintsy mirehareha amin’izany isika’’, hoy izy.
Ho an’i Christian, izay nankalaza ny faha 19 taonany tamin’io andron’ny filaharana io, dia vao mainka tena fankalazana ny tsingerin-taona niavaka ho azy izany. ‘’Acho’’ no fanampin’anarana tany amin’ny niaviany, izay midika hoe ‘’Voninkazo iray izay tonga teto an-tany’’. Nianatra mba ho tonga mpisolovava izy ary nampiasa ireo lalàna mba hanampiana ireo mpifindramonina. Nilaza izy noho izany fa hamboly ny fakany [hametraka ny fototra] izay hamokatra any Brezila.
Fotoana ihany koa ahafahana misarika ny sain’ireo Breziliana amin’ny olana misy ao amin’ny firenena hafa ny diabe. Tahaka ny tranga ho an’ny jadona tany Ginea izay nahaterahan’i Alga Umaru Balde. Nahazo ny zom-pirenena roa tamin’ny tolona manan-danja nataony i Alga ary ankehitriny izy izao dia Breziliana. Feno ny fony raha nilaza hoe :’’Tsy mampidi-doza ho an’i Brezila izahay. Eto izahay mba hanampy amin’ny fananganana azy ihany koa’’.
Nihoatra noho ny nantenain’ny vahoaka ny diabe, araka ny voalazan’i Roque Patussi, Breziliana sady mpandrindra ny Foiben’ny fanohanana Pastoraly ho an’ny mpifondra monina (CAMI), iray amin’ireo mpikarakara ny filaharana. Indrindra fa noho ny fandraisana anjaran’ireo mpifindra monina ireo ihany izay nanararaotra ny diabe ho toy ny fitaovana hibodoana ny toerana ho an’ny daholobe mba ho re feo.
‘’Niha-betsaka ny fanohanan’ireo vondrom-piarahamonin’ny mpifindramonina ny diabe. Teo aloha, izahay no nikarakakara ny zava-drehetra. Ankehitriny, izy ireo no mikarakara ny zava-drehetra, mandamina sy mampiroborobo. Ny andraikitray dia ny manampy amin’ny fitarihana sy ny fanampiana ny diabe amin’ny hetsika ataony, hoy i Patussi nanazava.
Tamin’ireo sakana rehetra izay tsy maintsy noresen’ireo mpikarakara dia avy any amin’ireo manampahefana no ratsy indrindra izay nanemotra ny fanomezan-dalana ary nametra ny hetsika ho amin’ny toerana tena voafetra.
Tena zava-dehibe ny diabe ho an’ny solontenan’ny ekipa fototra Warmis-Fiaraha-mironan'ny kolontsaina, Ho an’i Elvira Riba Hernandez, tena faran’izay manan-danja ny hetsika saingy tsy tokony hijanona eo amin’ny fivoriana fotsiny ireo mpifindra monina amin’io fotoana io. Tokony mitady indray ny sehatra hihetsehana mba hiatrehana ny hoavy izay tsy misy mihitsy izy ireo amin’izao fotoana izao.
‘Eto amin’ny kihon-dalana ara-politika saropady isika izao. Fantatra fa efa nisy ny fanafihan’olona teny an-dalambe noho ny kabarim-pankahalana mahery vaika’’, hoy I Elvira izay Kostarikana.
Nampianatra alohan'ny fotoana ny zanany lahy ny maha sarobidy ny fitakiana ny zon’ireo razambeny i Elvira Riba Hernandez l Sary : Pâmela Vespoli/MigraMundo
Ity lahatsoratra izay nivoaka voalohany tao amin’ny tranonkala MigraMundo ity dia navoakan’ny Global Voices eto ho ampahany amin’ny fiaraha-miasa.